> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan VRO in MP4
VRO waa qaab ay isticmaalaan DVD video rikoorrada ama qaar ka mid ah kaamirada la Mini-DVD disc. Haddii aad u badan oo files VRO duubay, waxaa jira fursad aad rabto in aad si loogu badalo VRO in MP4 for isticmaalka. Sababtoo ah files VRO sidaas ma u fududahay in aad u isticmaashid, play ama edit, halka MP4 noqon kartaa mid taageero qalab badan ama ciyaaryahan warbaahinta. Diinta VRO in MP4 ha kartaa in aad ciyaari VRO inta badan ciyaartoyda warbaahinta ama aaladaha la qaadi karo sida iPhone, iPad, PSP iyo wixii la mid ah.
Qeybta 1: Best VRO in Converter MP4 for Windows / Mac
Qeybta 2: Free VRO in Converter MP4
Qeybta 3: Online VRO in Converter MP4
Qeybta 1: Best VRO in Converter MP4 for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
• Beddelaan VRO dhammaan noocyada kala duwan ee ah qaabab video kulul oo ay ku jiraan AVI, MP4, MKV, MOV, iwm
• U beddelaan si toos ah VRO in telefoonada Android & Apple, ama Final Cut Pro & iMovie u tafatirka.
• goo, dalagga ama ku darto saamaynta aad VRO videos.
• Gubashada VRO in DVD wanaagsan la wadaago saaxiibo ama ka fiican ilaalinteedu.
Sida loo badalo VRO in MP4
Baro hoose ee ku saabsan sida loo badalo VRO in MP4 in Windows (Windows 10 ka mid ah). Haddii aad qabto OS Mac ah, kaliya aad u hesho tutorial ah halkan oo ku saabsan sida loo badalo VRO in MP4 ee Mac (El Capitanincluded)
1. Ku dar VRO videos in VRO in ay Converter MP4
Marka hore, badbaadiyo files VRO kombiyuutarka. Haddii ay horeba waa in aad kombuutarka, kaliya aad u tagtaan inaad folder ay ku jiraan kuwan files VRO. Markaas, jiidi faylasha VRO aad rabto in aad ka gal ah in ay leeg- tahay tan app ee. Ama, guuraan jiirka inay ku dhufatey "Add Files" badhanka si aad u ogaato faylasha VRO deegaanka ka dibna iyaga ku shuban.
Fiiro gaar ah: app waxa uu leeyahay awood u leh inay ku milmaan dhowr videos galay mid ka mid file. Haddii aad u baahan tahay si ay ugu biiraan oo dhan oo ka mid ah VRO laga keeno wada xereeyo mid, kaliya calaamadee sanduuqa "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" in tallaabadaas.
Waxaa jira laba hab oo kala duwan si aad u furtid wax soo saarka qaab daaqadan app ee. Mid ka mid ah waa in la furo liiska hoos-hoos qaab ku saabsan "Qaabka Output" Murayaad barnaamijkan. Kale waa in la weeraray image qaabka isku meel.
Marka aad u samayn, waxaad tagi kartaa ah "Qaabka" category> "Video" subcategory. Ka dibna dooro "MP4 Video" sida qaab wax soo saarka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad yoolkeeda kama dambaysta ahi yahay inuu u ciyaaro VRO qalabka qaar ka mid ah, inaad si fiican u dooran lahaa qalabka halkii MP4. Maxaa yeelay qaab wax soo saarka ee qalabka ay bixiyaan app this geli karaan qalabka ugu fiican si toos ah, si aad u ma baahna in la qabsadaan wax kasta oo kale oo xuduudaheedu video.
3. Start VRO in ay diinta ka MP4
Hit ah "Beddelaan" badhanka si ay u qabtaan VRO in ay diinta ka MP4. Markaas, app samayn doonaa shaqada nasasho kuu. Hadda, waxa aad ka arki kartaa qataarrada horumarka diinta ka muujinaya. Marka horumar uu gaaro 100%, aad faylka badaley galka wax soo saarka ay ka heli karaan.
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free VRO in Converter MP4
Waxaad isticmaali kartaa free VRO si Converter MP4 si loogu badalo videos, xaalkaa videos, iyo soo bixi YouTube videos.
Pro: Free, aad u fududahay in la isticmaalo
1. Waxaad kaliya u isticmaali karaan in ay leeyihiin 10 beddelaad ee 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta.
2. Ma jiraan wax presets in laydin sii badalo qalabka sida telefoonada gacanta.
3. Waxaa loo isticmaali karaa DVD gubanaya.
Ma doonaysaa in ay leeyihiin wax ku ool ah oo waayo-aragnimo wax ku ool diinta? Isku day Video Converter Ultimate hoos ku qoran.
WebM in Converter MP4: Sida loo Beddelaan WebM in MP4
Sida loo Beddelaan wmv in DVD on Mac iyo Win (Windows 10 ka mid ah)